Kharashka bukaan socodka ee Västra Götaland/Patientavgifter i Västra Götaland - 1177 Vårdguiden - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Kharashka (ca 5 sidor)
Ka ilaalinta kharashka-badan, daryeelka bukaan socdka banaanka, SEK 1100 (ca 2 sidor)
Kharashka marka lagu dhigo cosbitaalka (ca 2 sidor)
Ka ilaalinta kharashka-badan, daryeelka bukaan socdka banaanka, SEK 1100
Kharashka marka lagu dhigo cosbitaalka
Waxaad bixin doontaa kharash isku mid ah hadaad isticmaasho adeega daryeelka caafimaadka ee gobolka Västra Götaland ama ka adeega daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay ee gobolku qandaraaska la leeyahay.
Qaar ka mid ah ciyaadadahu waxay qaataan lacag kaash ah oo kaliya: Kuwaasi inta badan waa ciyadadaha yaryar. Intaanad booqan ka hor weydii.
Booqashada dhakhtarka ee daryeelka caafimaadka koowaad ee VG
Booqashada daryeelka caafimaadka - 24 saacadood maalintii
SEK 100 (xarumaha daryeelka caafimaadka ee la doortey)
SEK 300 (xarumaha daryeelka caafimaadka ee kale)
SEK 200 (xarumaha daryeelka caafimaadka ee la doortey)
Booqashada dhakhaatiirta ciyaadadaha kale
Booqashada dhakhtarka takhasuska daawada ee ku jira waxqabadka/hawsha gobolka
Booqashada dhakhtarka takhasuska daawada ee kale iyo booqashada guriga
Booqashada dhakhtarka dumarka
Booqashada dhakhaatiirta kale ee takhasuska leh
Booqashada dhakhaatiirta kale ee takhasuska leh ee gudbinta ka timaada dhakhtarka takhasuska daawanta ama dhakhtarka ka midka ah Daryeelka Koowaad ee VG
Bixinta daryeelka daaweynta ee ku jira Daryeelka Koowaad ee VG
Booqashada kalkaalisada degmada, kalkaalisada, daryeelaha bulshada ama dhakhtarka dhimirka iwm., sidoo kale qaabilsan waxa loo yaqaan qaadida tijaabada dhexe
SEK 50 (xarumaha daryeelka caafimaadka ee la doortey)
SEK 100 (xarumaha daryeelka caafimaadka ee kale)
Bixinta daryeelka daawada ee ciyaadadaha kale
Booqashada daryeelaha bulshada ee ciyaadada da'yarta
Booqashada dabiibaha shaqada iyo dabiibaha jidhka
Booqashada guriga ee dabiibaha jidhka
Xarunta xiliyada saacadaha shaqada ka baxsan - daryeelka caafimaadka koowaad (ka baxsan daryeelka Caafimaadka Koowaad ee VG)
22.00-07.00, 7 maalmood todobaadkii
Booqashada dhakhtarka iyo bixinta daryeel daawo
Booqashada/daaweynta koox ahaaneed
Warqada daawada oo telefoonka, boostada, e-maylka iwm laguugu qoro.
Kharashka maalin kasta oo daryeelka ah marka cosbitaal lagu dhigo
Safarka ambulaanska, safar hal mar ah (sidoo kale carruurta)
Raajada baadhitaanka naasaha dumarka
Tijaabada baadhitaanka hoosta dumarka
Baadhitaanka halbowlayaasha caloosha balaasha
Booqashada wax u wareejinta, tijaabada/ugu rakibida ama tabobarida caawiyayaasha
Booqashada ciyaadada oo keenta in cosbitaalka lagu dhigo
*) Ku xidhan adeega daryeelka caafimaadka aad booqatey
Caruurta iyo da'yarta
Dhamaan daryeelka daawada ee carruurta iyo da'yarta da'doodu tahay ilaa 19 sano waa lacag la'aan.
Daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah
Noocyada booqashadan waa lacag la'aan:
Booqashada ciyaadadaha hooyada/dhalmada
Booqashada ciyaadadaha daryeelka caafimaadka carruurta
Booqashada ciyaadada dhimirka ee carruurta iyo da'yarta
Booqashada talada ku sabsan ka hortaga iyo joojinta uurka
Booqashada sida ka dhank ah Xeerka Cudurada Faafa ee Iswiidhan
Booqashada dadka la soo qabtey/la xidhay iyo maxaabiista jeelasha
Booqashada dadka qaadanaaya tabobarka milateriga iyo kaalmada tabobarka milateriga ee Xooga Dalka ku jira
Booqashada daryeelayaasha bulshada ee ujeedada shaqada bulshada
Dhamaan daryeelka daawada ee carruurta iyo da'yarta ay da'doodu tahay ilaa 19 sano
Talo bixinta telefoonka
Lacagtaada waa laguu soo celinayaa hadii aad wax ka badan 30 daqiiqo sugto
Hadii aad balan ka qabsatey booqasho laanta daryeel caafimaad ah oo uu gobalka Västra Götaland maamulo, ma u baahnid inaad sugto in ka badan 30 daqiiqo kadib xiligaaga balanta. Hadii ay noqoto inaad sugto wax ka badan, waxaad xaq u yeelan doontaa lacag celin kharashkaaga bukaan socodka ah ee aad bixisay. Iyada oo aad wali heli doontaa daryeelka iyo daawada aad u baahan tahay. Taasi kama mid aha booqashada gargaarka degdega ah ee ciyaadad gargaarka degdega ah ama ciyaadad saacadaha shaqada ka baxsan. Kharashka bukaan socodka waxa laguu soo celin doonaa xiliga booqashada oo kaliya oo aan aheyn ka dib.
Kharashka hadii aad imaan weydo
Hadii aad imaan weydo booqasho laguu qabtey iyadoo aanad baajin, waa inaad bixiso isla lacagta kharashka bukaan socodka ee aad markii horeba bixin laheyd. Booqashada la qabsadey waa in la baajiyo ugu yaraan 24 saacadood ka hor xiliga balantu aheyd. Hadii aad imaan weydo booqasho aanad kharashka bukaan socodka ka bixiseen, waxa lagaa dalban doonaa inaad bixiso kharash SEK 100 ah. Kharashkaa ma ka mid noqon doono habka ka ilaalinta qiimaha-sare. Kaadhka la'cag la'aanta laguma isticmaali karo lacag bixin hadii aad imaan weydo booqashada.
Biil ku bixinta
Hadii aanad kaash ama kaadh ku bixin, waxa lagu siin warqad biil ah oo kharshka bukaan socodka ah.
Ka ilaalinta kharashka badan waxa uu micnahiisu yahay inaanad u baahneyn inaad bixiso wax la xadeeyey oo kharashka bukaan socodka ah mudo hal sano ah. Waa inaad isku geyso kharashka kaa baxay ee booqashada ciyaadada gobolka gudihiisa, goleyaasha degaanada kale iyo adeegyada daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay (kuwaas oo gobolka ka haysta qandaraas). Waxaad bixisay waxa lagu calaamadeyn kaadhka kharashka badan. Markaad gaadho xadka ugu sareeya, waxa lagu siin doonaa kaadhka bilaashka ah. Taasi waxa ay ku siin doontaa daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah mudo ilaa 12 bilood ah marka laga bilaabo taariikhda aad booqashad ugu horeysay sameysay.
Hadii aad booqatey ciyaadad nooc kasta (adigoo bukaan socod banaanka ah) iyadoo aad bixisay isku geyn SEK 1 100 oo daryeelka dawada ah iyo daaweynta mudo hal sano ah, ka ilaalinta kharashka badan ayaa shaqeyn doonta iyadoo kaadh bilaash ah lagu siin doono. Qeyb daryeelka ilkaha ah ayaa iyana lagu dari karaa taas. Taasi waxa ay saameynaysaa kaliya hadii daryeelka ilkaha loo arko inuu yahay daaweynta cudur ama waxa loo yaqaano daryeelka ilkaha ee asaasiga ah.
Ka ilaalinta-kharshka badan ee safarka bukaan socodka, SEK 1500
Gaadiidka bukaan socodka, waa inaad bixiso 1500 sanadkii si ay ka ilaalinta-kharashka badan u shaqeyso.
Taasi waa waxaad sameyso
Booqasho kasta, ku dhaji xagiijinteeda kaadhkaaga qiimaha badan ama weydii shaqaalaha inay kuu qoraan waxa kharash aad bixisay. Kaadhkan waxa laga helayaa ciyaadada. Waxa kale oo aad la soo noqon kartaa xaqiijinta daryeelka iyadood u geyni ciyaadada mar danbe. Shaqaalaha ayaa hubin in isku-geynta saxa ah lagu qorey kaadhka kharashka badan.
Si joogto ah u eeg si aad u hubiso inaanay dhaafin tirada laguugu ogolaan doono helitaanka kaadhka bilaashka ah. Lacagtaada laguuma soo celinaayo hadii aad dhaafto xadka kharshka-badan.
Maxaa ka ilaalinta-kharshka badan ka mid ah?
Ka ilaalinta-kharashka badan waxay shaqeynaysaa marka aad booqato ciyaadad daawo iyo marka aad hesho daryeel daawo oo ay bixin karto kalkaalisada degmadu, dabiibka dhimarka ama dhakhtarka dhimirka, tusaale ahaan. Waxaad xaq u leedahay waxa loo yaqaano daryeelka ilkaha ee aasaasiga ah ama daryeelka ilkaha sida ka dhanka ah daaweyn cudur, waxa kale oo aad ku dari kartaa kuwaas kharashka bukaan socodka.
Ilaalinta kharashka-badan ma daboosho wax kasta. Tusaale ahaan ma daboolayso:
daryeelka ka hortag ah, sida baadhitaanka raajada naasaha dumarka iyo baadhitaanka caafimaadka hoosta dumarka
kharashka booqashada aad imaan weydey
kharashka nuqulada qoraalka xaaladaada﻿
Carruurta iyo da'yarta ka yar 18 kuwaas oo dhamaan ka tirsan qoyska isku mid ah waa ay wadaageyaan ilaaladooda kharashka- badan. Kharashka carruurta waxa la iskugu keenaa hal kaadh oo isku mid ah.
Hadaad lumiso kaadhkaaga bilaashka ah
Keydso kaadhkaaga kharashka badan, iyo qoraalada kharashka aad bixisay, ama wixii xaqiijin ah ee markaad heshay kaadhkaaga bilaashka ah tusaaya. Waa ay markaa adiga kuu dhib yaraan doontaa inaad hesho kaadh cusub oo bilaash ah (isla xiliga uu shaqeynaayey kii hore) hadii aad lumiso ama meeshaad dhigtey garan weydo. Waxa tan kaa caawin karta ciyaadad kasta.
Waxaad heli kartaa kaadhka bilaashka ah, xataa adigoon haysan dhukumentiga aad ugu baahan tahay kaadhkaaga bilaashka ah. Xaaladaas waa inaad la xidhiidho ciyaadada soo saartey kaadhkaaga bilaashka ah ama ciyaadad kasta oo aad ku booqatey kaadhkaaga bilaashka ah oo diiwaan galisay xiliga uu shaqeynaayey.
Kharashka bukaan socodka kasta oo la dhigo cosbitaalka waa SEK 80 maalintii.
Hadii aad imaan weydo qorshe laguu qorsheeyay adigoo bukan socod gudaha ah adigoon baajin balantaada, waa inaad bixiso kharash qiime ilaa SEK 300. Baajintu waa inay dhacdaa ugu yaraan 24 saacadood ka hor xiliga balanta.
Bukaan socod kasta oo helaaya kaalmada waxqabadka ama kaalmada dadka curyaanka oo ka yar 40 sano waxa uu bixin doonaa 50% kharashka ah inta 30 cisho ee ugu horeysa ee daryeelkiisa/kiida. Bukaan socodku waxa uu bixin SEK 80 maalin kasta oo ka danbeysa 30 maalmood.
Hadii uu bukaan socodku dhinto, gobolkiis/keeda ayaa bixin doona kharshka daryeelkiisa/keeda.
Daryeel caafimaad oo bilaash ah
Bukaan socodka gudaha jooga qaarkood daryelka caafimaadku waa u bilaash. Taasi waxay shaqeynaysaa, tusaale ahaan:
Carruurta iyo da'yarta ilaa da'da 19 sano ah
Qof kasta oo helaaya daryeel caafimaad sida ku dhanka ah Xeerka Cudurada faafa ee Iswiidhan
Dadka la soo qabtey, kuwa la soo xidhay iyo maxaabiista jeelasha ku jiirta.
Cid kasta oo qaadanaysa tabobarka milatariga iyo tabobarka dheeraadka ee milatariga ee ku jira Ciidanka Xooga Dalka.
Bukaan socodka haysta fasax oo ka maqan cosbitaalka mudo ka badan 12 saacadood inta u dhaxaysa 06.00 iyo 24.00.
Ilalinta kharashka-badan ee bukaan socodka gudaha
Bukaan socodka guduhu waxay bixin doonaan kharash isku geyn aan ka badnaan doonin SEK 1200 oo mudo 30-cisho gudahood ah. Daryeelka ku jira ilaalintan kharashka-badan ee daryeelka caafimaadka bukaan socodka gudaha ee xadka gobolka, ay gobolku wadaan ama adeeg daryeel caafimaad oo qandaraas ka haysta gobolka Västra Götaland.
Ilaalinta kharashka-badan waxa kaliya heli kara dadka degan gobolka Västra Götaland. Ilaalintan waa mid shakhsi ah iyadoo aan lagu dari karin kharashka bukaan socodka ee qoyska intooda kale.
Daryeelka danbe iyo baxnaaninta, guryaha kalaalinta
Kharashka bukaan socodka ee daryeelka danbe iyo guryaha kalkaalinta waa isku mid maadaaha ay kharash ka qaadaan daryeelka bukaan socodka gudaha. Taas waxa weeye micnaheedu in bukaan socodku bixin doonaan SEK 80 maalintii marka daryeelka ay golaha degaankoodu soo ogolaadaan.
Ta la midka ah kuwa qeybta daryeelka bukaan socodka gudaha – eeg kor – ayaa laga deyn doonaa kharashka.
Ilaalinta kharashka-badan kuma shaqeysa daryeelka danbe, baxnaaninta iyo guryaha kalaalinta.
Margareta Axelson, regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning, Västra Götalandsregionen.